Obere oge ị kwesiri yikwasị enyo enyo igwe - ULLER
Ilekọta ọhụụ gị mgbe ị na-eme egwuregwu dị ka snowboarding ma ọ bụ ski dị ezigbo mkpa iji mezuo ebumnuche anyị. Ma ọ bụ iji kacha mma ụzọ Iko ugo (akpọkwara ya nkpuchi ma ọ bụ goggles snow) dị oke mkpa dị ka iburu skis gị ma ọ bụ snowboard, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ na uwe kwesịrị ekwesị. A nnukwu pasent nke nkà anyị na snow egwuregwu na-adabere na anyị iche na visual agility, na eziokwu bụ na ọ bụ naanị na nke kacha mma glizzard goggles ga-enwe ike iru ọhụụ ịchọrọ mgbe anyị na-eme egwuregwu egwuregwu egwuregwu dị na snow.
Feel na-eche na ị dịla njikere imeri ihe ize ndụ nke okike na mpaghara snow? Nọgide na-agụ ma chọpụta oge 5 dị oke mkpa nke ị ga - enwe ekele maka iwere ndị kachasị mma goggles snow!
Ndị a bụ oge dị oke mkpa iji kpoo ihu igwe gị!
1. MGBE OJI BU OJU
Gịnị bụ efe efe?
A maara oke ifufe nwere oke ifufe dịka "blizzard" ma ọ bụ "snowfall" nke ahụ na-eme ka ọhụhụ anyị belata na-erughị mita ole na ole. Ndị a bụ ọnọdụ dị oke njọ nke na-eme na ebe snow, yana ọtụtụ ihe egwu metụtara ya n'ihi na a na-ejikarị ha ikuku ikuku na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. (ihe dị ka 56km kwa awa) na okpomọkụ n'okpuru efu ogo centigrade.
Kedu ka blizzards dị?
na blizzards a na-akwanyere ha ugwu na "obere" ma ọ bụ "elu" dabere na ọnọdụ ha. Ihe ndị a bụ ihe ịtụnanya nwere ike imetụta ndị egwuregwu n’ọdachi ahụ ma ọ bụrụ na ọ kwadobeghi nke ọma ma chekwaa ya ka ọ ghara ịnagide ha.
Eluigwe ọ̀ dị ize ndụ?
na blizzards ha na-eme n'ike siri ike nke na-adịgide ma ọ dịkarịa ala awa 3, nke ice, alaka, akụ mmiri igwe na okwute na-agagharị n'akụkụ niile. Nke a na - egbochi ọhụhụ egwuregwu na nchekwa ya, ọ nwere ike imerụ ahụ, isi, na anya. Oge a, mgbe oke mmiri jiri mee, bụ isi ihe maka ndị niile hụrụ egwuregwu dị egwu, n'ihi na ha ga-adị njikere nke ọma iche ha, n'uche na n'ụzọ anụ ahụ. Tụkwasị na nke a, ọ ga-adị mkpa iburu akụrụngwa kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na anyị ga-atachi obi mgbe mmiri na-eju mgbe anyị na-eme egwuregwu na snow. Cheta ịkwadebe nke ọma maka oge a yana ihe ndị dị mkpa ma cheta mgbe niile ị ga-eyi iko blizzard gị nke ọma mee ka ọhụhụ gị mee gị nkọ n'okpuru ọnọdụ ndị a. Ọ bụrụ n'ịchọta onwe gị na ikuku mmiri ahụ, chọọ ebe dị nso ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụ ezie na nkwanye ga-abụ ịgbadata ala ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala belata elu dị ka o kwere mee.
2. N’OGE kacha elu
Kedu ihe egwu dị na anyanwụ n'oge awa kacha elu?
Echefula na a na-eme ka radieshon anyanwụ dịkwuo elu n'oge kachasị elu (site na elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere 15 nke ụtụtụ), ọkachasị ma ọ bụrụ na anwụ na-acha na snow ọcha. Mgbe nke a mere, ihe egwu nke ịta ahụhụ na ịmị ọkụ na akpụkpọ ahụ na anya na-aba ụba. N’oge awa kacha elu, mmetụta ọjọọ nke ụzarị ultraviolet na-abawanye, n’ihi na mmetụta ha n’elu ụwa na-abawanye. Buru n'uche na n'oge ọkọchị, elekere 9:00 nke ụtụtụ na-ewerekwa oge ọsọ ọsọ nke na-emerụ ahụ ike na visibiliti.
Mgbe anyị na-egwu mmiri na snow n'oge kacha elu, ọkachasị n'ehihie, ọ dị oke mkpa ka onye na-eme egwuregwu na-eyi uwe aka mgbe niile n'anya ha (ọ bụghị n'isi ha) glizzard goggles ma ọ bụ àgwà ski nkpuchi. Nke a bụ iji nagide oke ụzarị ọkụ dị na ebe snow na-echebe anya pụọ ​​na mmebi sitere na ụzarị anyanwụ. Buru n'uche na ọhụụ anyị na-arụ ọrụ na mgbe anyị na-eme egwuregwu egwuregwu ga-echekwa nke ọma ma ghara imebi ya. Ọ ga-ekwe omume na oke ọkụ nwere ike imetụta ọhụụ gị ogologo ma ọ dị nso ma ọ bụrụ na i jighị uwe enyo ọma, a gaghị atụ aro ka ị mebie nghọta anya.
Cheta na, n’agbanyeghi na awa kachasi elu n’oge n’enwe ihe ojoo n’ahu aru aru anyi na anya anyi, nke a aputaghi na awa ndi ozo adighikwa egwu, n’ihi na ha di. Anyanwụ radiesị na-adị mgbe niile, site na ụtụtụ ruo mgbede, ọbụlagodi na ụbọchị igwe ojii. Anyanwụ na-enwe ike ịgafe urukpuru ndị ahụ! Obi ga-adị gị ụtọ ịnara ihe ọma goggles snown'oge niile.
3. N’ỌMATOR egwuregwu
Otu n'ime oge kachasị mkpa maka onye ọ bụla na-eme egwuregwu dị egwu bụ asọmpi egwuregwu. Akpịrị ịkpọ nkụ maka adrenaline nke ndị egwuregwu na-asọ mpi na ụdị dị iche iche na snow bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịba ụba. Na asọmpi egwuregwu enweghị ohere maka inwe obi abụọ, naanị ntụkwasị obi, nka, onyinye na mmụọ asọmpi, mana ọ dịkwa mkpa iburu akụrụngwa niile kwesịrị ekwesị.
N'oge asọmpi ọ na-etinye ihe niile, ọ ga-adị njikere nke ọma ma kwadebe maka ya. Mgbe ị na-eme ski ma ọ bụ snowing, itinye uche gị ga-elekwasị anya na iru ihe mgbaru ọsọ na ịgbagharị n'ụzọ ziri ezi, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ole na ole glizzard goggles nke ọma eyi na-elekọta ma na-echebe gị visual nso mgbe ị isonye na oké asọmpi na snow, n'ezie ndị ọzọ ga-abịa ndammana.
4. Ọ B IFR YOU NA ARE BANYERE
Ọ kwesịrị m iyi akwa glowị m ma ọ bụrụ na m bụ onye mbido?
Ikwesiri iburu ugo ihu igwe ma ọ bụ ihe nkpuchi snow mgbe niile, n'agbanyeghị ma ị bụ onye mbido ma ọ bụ na ị bụ ịgba mgba na egwuregwu ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-ewebata onwe gị n'egwuregwu snoo, ị ga-amụta ntakịrị etu ị ga-esi jee ije na snow, iburu skis ma ọ bụ snowboard n'aka mgbe ị na-arị ugwu ... n'oge ahụ nke ị dabara ozugbo ị ghọrọ ibuli.
Ma ọ bụ na mgbe anyị malitere n'egwuregwu egwuregwu na egwuregwu snow anyị na-amalite site na mbido na mmegharị nke ndị ọkachamara na-eme kemgbe ọtụtụ afọ, n'otu aka ọ dị mfe na nke ọzọ dị mgbagwoju anya, mana ọ bụrụ na ị bụ onye njem na-eme ihe n'eziokwu ọ dịghị ihe na - egbochi gị mgbe ị na-eje ije. Mana ọ bụghị naanị na ị dị mkpa ịkwụsị ihe ọbụla, ọ dị mkpa na ihe ọ bụla ị na - eme na - akpali gị ịga n’ihu. Ugbu a ị na-ekiri asọmpi, na-aga klaasị ma na-eme ọtụtụ ihe iji dịrị njikere maka ime ihe, mana nke nta nke nta ị ga-ahụ otu obere mkpebi ndị ị na-eme n'ụzọ na-eme gị nnukwu onye egwuregwu ị nwere ike ịghọ.
Nke nta nke nta, ị ga-amata ngwa ọrụ ịchọrọ iji were, uwe na-ekpo ọkụ, akpụkpọ ụkwụ, bọọdụ ma ọ bụ skis, okpu agha na mkpuchi nkpuchi. ¡Chọta ndị ziri ezi maka gị ma nwee otu na egwuregwu ahụ!
Will ga-ahụ mkpa ọ dị iburu akụrụngwa niile ịchọrọ, ọkachasị ndị ahụ glizzard goggles nke ahụ ga - echebe ọhụụ gị na ihu gị mgbe ị na - amaba na snoo.
5. Ọ B IFR YOU NA I NWERE NEBECREC AKWECKWỌ AKW ,KWỌ, NT CKWU ND OR
Ọ bụrụ na ịnwere ọnọdụ anya ọ bụla dịka presbyopia, hyperopia ma ọ bụ astigmatism ị ga-azụrịrị ụfọdụ goggles snow na-enye gị ohere imeghari na a abụọ oghere, nke mere na gị visual ọnọdụ ndị kasị ezigbo mgbe ị na-eme ski ma ọ bụ snowboarding. Ga-enwerịrị oghere pụrụ iche emere maka usoro gị, mana maka ha ihe nkpuchi ịzụrụ ga-abụrịrị kennyeghari magnetik skai ugogbe anya.
Ọ nwere ihe ọfụma snow na-agbazi?
N'iji ihe nkpuchi ski nwere ike di ma nwekwaa otutu uru. Nke mbụ, ha na-ekwe nkwa ọhụụ zuru oke na nke abụọ ha dị mfe ịmegharị ma ọ bụ tinye ihe nlele anya nwere anya m gụsịrị akwụkwọ ka ọ dị mkpa. Cheta na ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji egwuregwu iko mgbe niile na-eme egwuregwu ọ bụla; Ndị a ga-abụ ọkachamara na mgbanwe maka ọnọdụ anya gị.
Ọ bụrụ n’ị bụ otu n’ime ndị na-arịa ọrịa dị iche dịka ọnọdụ uche nke foto, ọ dịkwa mkpa ka ị were nke ọma glizzard goggles na-enye gị ohere ịgbanwe na udi nke oghere ị na-eji na ugogbe anya gị.
Cheta na ihu igwe na nchapu n’ebe ndi snow na-adi ike karie ka ha siri dikwa, ma nwekwaa ike ighota otutu site n’otu oge rue ozo. Ọ bụrụ na ị nwere Igwe ndọba na anya m nwere ike ịgbanwe Ọ ga-adịrị gị mfe iji nke kwesịrị ekwesị mgbe ịchọrọ ya! Were ya na ị ga-enwe ike ịtọpụ ma gbanwere nke gị goggles snow na sekọnd ole na ole!
Soro ndị a na-atụ aro iji họrọ kacha mma iko maka VENTISCA!
Etu esi ahuputa akwa gogulu kacha mma?
Ha ga-enwerịrị nchedo UV-400 na 99% ma ọ bụ 100% nchebe na-enweghị mgbakwunye, ma ọ bụ na ị ga-emebi anya gị na usoro ahụ.
Zụta site na glizzard goggles na oghere ndọta na-agbanwe agbanwe ka ị nwee ike ịhọrọ ụdị iko kachasị mma maka ụdị ihu igwe na ncha ọ bụla.
na goggles snow na ị họrọ kwesịrị inye gị ezigbo nghọta anya, yana ọhụụ kwesịrị ekwesị iji mara ebe dị iche iche snowy na-agba ma ọ bụ snow. Site na nke a ị ga-enwe ezigbo echiche nke mkpọda na mkpọda, yana obere mgbagha na ọmarịcha ọhụụ.
Họrọ goggles snow foogu na ụbọchị oké ifufe, blizzard na visibiliti dị ala. Ugboro abụọ skai enyo na mgbochi foogu bụ ihe ndị kachasị atụ aro. Ndị a na-enye sistemụ ikuku ikuku nke ga-ekpocha ọkụ na enyo enyo gị.
Purzụ glizzard goggles ọkụ nwere ezigbo mpempe akwụkwọ mgbochi ka ọ na-edozi nke ọma n'isi gị na okpu agha gị. Na thicker ka mma!
Lelee nke ọma na enyo enyo gị na-akwadoro CE ma rube isi na ụkpụrụ nchekwa European.
Họrọ ihe nkpuchi kacha mma Ọ dị mfe ịme! Naanị buru n'uche na ọ ga - abụ ezigbo enyi gị iji kpuchido anya gị site na radieshon na ọkụ gosipụtara na snow na ihu igwe n'ozuzu: alaka, snow, ụmụ ahụhụ ...
Iji akụrụngwa kwesịrị ekwesị mgbe ị na-egwu ski ma ọ bụ snow dị mkpa ka ị nwee obi ụtọ ma nwee adrenaline n'ụzọ zuru oke, nke ahụ gụnyere, n'enweghị obi abụọ, dị mma snow ugogbe anya. Echela oge ọ bụla maka ya!